Category Archive for "13. Kamma Paccaya" | Dhamma Training Center
Category Archives: 13. Kamma Paccaya
Category Archives: "13. Kamma Paccaya"
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၃ – ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Khamma condition)
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၃ - ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Khamma condition) [caption id="attachment_13918" align="aligncenter" width="300"] Life cycle of gladiolus plant. Stages of growth from planting corm to adult plant with flowers[/caption] (PDF ဖိုင်) အား အောက်တွင် ရှိသော Link မှ ဒေါင်းယူနိုင်ပါသည်။ Download...
13. Kamma Paccaya, General, News
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၃ – ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Khamma condition) PDF File
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၃ - ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Khamma condition) [caption id="attachment_13918" align="aligncenter" width="300"] Life cycle of gladiolus plant. Stages of growth from planting corm to adult plant with flowers[/caption]...
၁၃ – ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Kamma condition) (1 of 9)
၁ - ကုသလတ္တိက ၇ - ပဥှာဝါရ
၁ - ပစ္စယာနုလောမ ၁ - ၀ိဘင်္ဂ၀ါရ
၁၃ - ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Kamma condition)
Kamma Paccayo Paccayaniddeso
၁၃ – ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccayo (Kamma condition) (2 of 9)
၁၃-ကမ္မပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ zawgyi
၄၂၇။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ ကမ္မပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကုသလာ စေတနာ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ ကမ္မပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၁) ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ ကမ္မပစ္စယေန ပစ္စယော။ သဟဇာတာ၊ နာနာက္ခဏိကာ။ သဟဇာတာ ကုသလာ စေတနာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ ကမ္မပစ္စယေန ပစ္စယော။ နာနာက္ခဏိကာ ကုသလာ စေတနာ ၀ိပါကာနံ ခန္ဓာနံ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ ကမ္မပစ္စယေန...
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၄ – အဝိဂတပစ္စယော Avigatapaccayo (Pańhāvāro)
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၄ – အဝိဂတပစ္စယော Avigatapaccayo...
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၃ – ဝိဂတပစ္စယော Vigata Paccayo (Disappearance condition)
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၃ – ဝိဂတပစ္စယော Vigata...
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော Natthi Paccayo (Absence condition)
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၁ – အတ္ထိပစ္စယော Atthi Paccayo (Presence condition)
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၁ – အတ္ထိပစ္စယော Atthi...